thesidhakura - TheSidhaKura
Author Archives: thesidhakura
ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष – अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ । धार्मिक यात्राको योग । मनमा शान्ति मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । खानपिनमा ध्यान दिनुहोला… Read More »
आजको तपाइको दिन – राशिफल
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । पढाई लेखाइमा मन जाने हुनाले नतिजा आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन रहने हुँदा पद प्राप्तिको योग रहेको छ । आफन्त तथा सहयोगीको साथ पाइने हुनाले कामहरू गर्न जोस जाँगर बढ्नेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ । तर पनि… Read More »